Guuleed: Farmaajo wuxuu ku danbeyn doonaa xabsi | KEYDMEDIA ONLINE
Guuleed: Farmaajo wuxuu ku danbeyn doonaa xabsi
Madaxweynihii hore ee Dowlad Goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in Farmaajo uu ka gudbay xeydaabka Dowladnimada.
MUQDISHO, Soomaaliya – Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka mid ahaa Madax iyo dad shacba ah oo saaka naftooda halis lagu galiyay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in Farmaajo go’aansaday inuu dadka Shacabka ah ku laayo xabbad uu u soo dhiibay dhalinyaro daacad u ah.
“Kali-talis Farmaajo xeyndaabka Dowladnimada wuu ka gudbay, maxaa yeelay xeydaabka Dowladnimadu waa sharci, waa Dastuur, waa ixtiraam, is qadarin, iyo is maqal”. Ayuu yiri Guuleed.
Guuleed wuxuu sheegay in aan dalka Soomaaliya qori caaraddiis loogu tali karin, wuxuu tilmaamay in qorshaha Farmaajo ee ah inuu xabbad ku dhameeyo shacabka Muqdisho aysan u suuroobi doonin, goodintuna dhamaaan doonto.
Madaxweyne Cabdikariin wuxuu hoosta ka xariiqay in Farmaajo uusan sharfid iyo karaameyn ka dhex heli doonin bulshada Soomaaliyeed maadaama uu yahay dhiigya-cab aan nixin.
“Farmaajo Sharftii Madaweyne Soomaaliyeed ee hore ma heli doono, Xildhibaan qaranna ma heli doono, wuxuu ku danbeyn doonaa xabsi, wuxuu ku danbeyn doonaa meel xun oo foolxun, maadaama uu shacabkiisii iyo dadkiisii uu xasuuqay”. Ayuu yiri Guuleed.
“Waxaan aamisanahay in Farmaajo uu siyaasadda soomaaliya si xun u soo galay, meel xunna wuu ka soo galay, siyaasina maaha, Hoggaamiyana maaha, muwaadinna maaha”. Ayuu sidoo kale yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Wuxuu hoosta ka xariiqay in aysan doorashada wada hadal kala galayn Farmaajo, xilka Madaxweynaha uusan u tartami karin maadaama uu yahay dhiigya-cab danbiile ah oo in la soo xiro ay u dhiman tahay.
Wuxuu ayaan darro ku tilaamay in hubkii iyo kaalmadii ay bixisay Beesha Caalamka uu Farmaajo u adeegsado dano gaar ah is-markaana ay AMISOM ilaaliso, kalitaliska go’aansaday inuu dadkiisa laayo.
Madaxda Maamul Goboleedyada ayuu ugu baaqay in ay soo saaraan go’aan ka dhan ah Farmaajo si dalka, dadka iyo degaanka loo badbadiyo.